Vedzisvondo Voratidzira Vachiti Vanoda Sarudzo Dzakachena Munyika
Vedzisvondo varatidzira muHarare vachiti vanoda kuti sarudzo dzegore rino dziitwe murunyararo kuitira kuti veruzhinji vasarudze hurumende yavanoda pasina kumbunyikidzwa.
Vedzisvondo varatidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana kubva paCauseway Post Office kusvika muAfrica Unity Square vachiti vanoda kuti sarudzo dzegore rino dziitwe murunyararo.
Zvimwe zvezvinyorwa izvo zvanga zvakanzi “Tinoda kuvhota murunyararo”.
Vachitaura mu Africa Unity Square, mutungamiri weDevine Destiny Network, Bishop Ancelimo Magaya, vati sarudzo dzegore rino dzinofanirwa kuitwa zvine musiyano dzichiitwa murunyararo kuitira kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvigotambirwa nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevekunze.
Mumwe ataurawo pachiitiko ichi ndiVaRashid Mahiya vanoshanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust avo vakaurudzira mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnagangagwa, kuti vabvise masoja anonzi ari kumaruwa vachiti ari kutyisidzira veruzhinji pamberi pesarudzo dzegore rino.
Vataura vakamirira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimrights, VaLeo Chamahwinhya, vati hurumende inofanirawo kuchengetedza kodzero dzeveruzhinji pamberi pesarudzo.
Sarudzo zhinji dzakapfuura dzakaitwa zvine mhirizhonga mukati zvikurusei musarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri dzakaitwa muna 2008 bato rinopikisa reMDC-T richiti pane nhengo dzaro dzinodarika mazana mana dzakaurayiwa zvine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbove mutungamiri weMDC, mushakabvu VaMorgan Tsvangirai, varambe kupinda musarudzo iyi.
Asi VaMnangagwa vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena uye pasina mhirizhonga.
Zvichakadai, vanga vachiratidzira ava vakurudzira VaMnangagwa kuti varege kungotaura chete asi kuti vaite zvose zvinodiwa kuti pave nesarudzo dziri pachena uye dzisina mhirizhonga.